Dhacdadii 14-kii Oktoobar oo Laba Gu’ Jirsatay | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Dhacdadii 14-kii Oktoobar oo Laba Gu’ Jirsatay
Dhacdadii 14-kii Oktoobar oo Laba Gu’ Jirsatay
(Muqdisho) 14 Okt 2019 – Dunidaan aan ku nool nahay Waligeed dagaal waa ka dhici jiray, lamana arag xilli kaliya oo uusan dabka dagaallada shidnayn ama Aloosnayn,waxaana la soo maray marxalado dagaallo oo taariikhda galay, sida dagaal weynihii 1aad iyo kii 2aad ee Caalamka.
Waxay dunida soo martay dagaalkii Tataarka (Mangoolis) uu ku qaaday aadanaha kale gaar ahaan Muslimiintii dhaxashay hadyigii Nabigeenna Csw, oo isagana ka tagay maharto ku tigraaran laabaha in badan oo insaanka ka mid ah, waxayna dagaalladaasi reebeen, kana tageen xusuuso,murugooyin iyo magacyo laga argagaxo oo maqalkeeda aan ku wanaagsanayn dhagaha dadka maanta nool in ay maqlaan sida dagaalkii koowaad, dagaalkii labaad ee aduunka iwm.
Sidoo kale 14 Oktoober sanadkii 2017, Soomaaliya waxay u noqotay maalin Murugo leh…..Maalin Mugdi ah….Maalin Madoow iyo maalin hal mar uu dhiigoodu qubtay in ka badan 1655-Qofood….Waa Xusuus ma harto ah….. waana maalin guri kasta oo Soomaali ku nool yihiin dal iyo dibad ay hal mar wada tiiraanyoodeen indhahoodana ay ilmeeyeen, kadib markii gaari xamuul ah “Bagaase” oo laga soo buuxiyey sun iyo kiimikooyin kala duwan iyo waxyaabaha qarxa oo aan la sheegi karin sida ay wax u galeen.
Previous articleQARIXII SOOBBE IYO QUDHAYDA!!!
Next articleXildhibaannada Liberia oo 30% mushaharkooda u jaray horumarinta dalkooda (Somalia waa taa cagsigeeda)